Iyintoni iQi Gong | Ukucamngca ngempilo
Qi Gong | UkuCamngca kwezeMpilo
Ukungafani emva kwekota elihlangeneyo
Uyaziwa ngamaQi Gong
Nabani na onomdla kwi-Asian martial arts namhlanje uya kufumana ngokukhawuleza. Ukubonelela okukhulu, imfuno kunye. Kodwa ngokungafaniyo, umzekelo, i-aikido yaseJapan, iShayina Gong Fu okanye i-Kung Fu izisa iingenelo ezithile. Ngenxa ubugcisa Kung Fu - nokuba dha Shaolin okanye Wudang Taoist Kung Fu - ibandakanya into kangaka ukufumana kwezinye ubuciko bokulwa. Ibizwa ngokuthi yiQi Gong.
Yintoni iQi Gong?
IQi Gong lixesha elihlangeneyo elivela kwiminyaka ye-1950. Ngezantsi zonke izinto ezichaphazelayo zomeleza iQi, amandla obomi. Uninzi lwamaxesha okuqeqesha luneminyaka engaphezu kwewaka elidala. Kwaye iimonki ezazivela kumaBuddha nakwaDaoist zangaphambili zaziqhuba iimvavanyo.
IQi Gong iqhubekile kwimvelo
Nangona kunjalo, i-Qigong ayidlala indima ebalulekileyo kwezobugcisa baseKhayina, kodwa nakwiyeza zaseShayina, okanye kwi-TCM efutshane. Kulapho kukho enye yeentsika ezintlanu apho i-TCM iyakha khona. Iinkalo ezahlukeneyo zidibanisa ukwenza ubunye. Ezi zibandakanya ukuphumla, uxolo kunye nobume, kunye nokuhamba, ukuphefumla kunye nengqondo engqondweni. Ngokungafaniyo nokucamngca, nanko ukuhamba kuhambelana nokuphumla. Ukuphefumula kwenzeka ngokubambisana, ukuhamba kuhamba kakuhle kwaye kuphuza.
Nangona kukho i-term for all exercises together, iQi Gong ihluke kakhulu. Inani elichanekileyo lokuzivocavoca alingaziwa. Uhlobo lweendlela zokuzilolonga lunokuchazwa yinkqubo eninzi eyenziwe malunga neenkulungwane. Master e China yamandulo wanika inkqubo yabo beemvavanyo abafundi zabo kuphela. Baye batshintsha kwaye bahlakulela umqondo wabo wokuzilolonga. Ukongezelela, ezininzi iingcamango ezintsha zongezwe ukwenzela ukuba iQigong ifikeleleke kwiindawo ezibanzi zaseYurophu naseMelika.
Ukuqeqeshwa kwe-QiGong yoxolo lwangaphakathi
Nangona kukho iintlobo ezahlukeneyo, zonke iziqu zoqeqesho zeQi Gong zinomgomo omnye: ukulinganisa iiQi emzimbeni. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uluhlobo luni lomzimba owenzayo. Umzimba ngamnye uhambelana nemida ethile yamandla, i-meridians, emzimbeni womntu. Ngenxa yoko, iziphumo zoqeqesho zihlukile.
Ukusuka ekufundiseni TCM ubonisa ukuba akukho nje uhlobo olunye lwe Qi, kodwa ngaphezulu: The nokuphefumla Qi, olufihlayo Qi, qi ukutya, esiqu qi, kunye nemibutho-Qi, nto leyo ngalinye kulo Amaqela ahlukeneyo. Zonke iindidi ze-Qi zikwazi ukuphumeza ukuphazamiseka kwempilo, oku ngamanye amaxesha kungabuyiselwa ngokulinganisela. Nangona kunjalo, oku kufuna ukuba usebenze ngokufanelekileyo kwi-disharmony.
Njengomgaqo, Qi Gong kanjalo wafundisa ukuba umntu ukuziphatha ngaphandle ulwazi iipateni lobuqu nokungavisisani apho, kunjalo. I wayefundisa Martial kubugcisa Qi Gong ijolise sikhathazekile ngakumbi ngokuzisa Qi zomfundi endaweni ukuqinisekisa ukuba ukubulawa Kung Fu unamandla ngakumbi yaye sinamandla.
Ezinye izifundo zenze iqondo lokufunda kwaye zifundiswa rhoqo. Ezi ziquka imisebenzi ezisibhozo yiBrocade ukuba 18 iintshukumo ze Taiji Qigon, uBa Fanhuangong, Chan Mi Gong, amashumi ngeengcamango 5 amalungu Qigong, umdlalo izilwanyana 5 okanye Meridian Qigong.
Iintlobo zeQi Gong zihluke nje kuphela kwimpumelelo nokulandelelana kokuzivocavoca, kodwa nakwiimvelaphi. Njengoko ne Kung Fu kunye Qi Gong uphantsi kweempembelelo iinkonzo eziphambili Chinese Buddhist Daoism. Lihlale eMonastri Taoist kwi Wudang Shan dha soze uya kufundiswa Shaolin Qi Gong and vice versa.
Umzekelo weBuddhist Qi Gong nguKhan Mi Gong. Oku kubizwa ngokuba yi-spinal qigong. Enyanisweni, kule fomu, umlenze uhanjiswe ngoncedo lwama-pulses like wave. Inkqubela ekugqibeleni idlulisela kuwo wonke umzimba.
Kutheni sifanele sidle imifuno?
Umzekelo kaDaoist Qi Gong yiingcinga ezilishumi ukusuka kwiNtaba yeWudang. Kulo msebenzi, kugxininiswe kuyo kumgaqo we-Daoist wokulinganisa. Umsebenzi ophakathi kukuba "Ientyatyambo ze-lotus zivuleka", ezingagcini nje ekusebenzeni komzimba kodwa zibandakanya izinto zokomoya.
Kuthatha amava amaninzi kunye nokuziqhelanisa ukukwazi kakuhle umba. Ukucamngca kweTshayina kunye nokunyakaza kobugcisa bunjengeenkqubela phambili njengoko iminyaka yokuphuhliswa kunye nobukhulu beChina buvumela. Nangona kunjalo, kubaqalayo, naluphi na uhlobo lweQi Gong lufanelekile ekuqaleni. Ekugqibeleni, zonke izifundo zineenjongo ezifanayo: ukulingana kweQi inye.
I-lemon yokuphila kunye nobuhle
Iindlela zokuphucula Ukuphucula impilo
Feng Shui | Ukuthintela impilo
I-sauna yaseFinnish | Wellness
I-Sauna - ukuphumula nokuphila kakuhle
Yenza ibhola yokuhlamba ngokwakho Ubomi be-DIY
UbuGcisa obuPhezulu, UkuPhepha nokuTya